Uchwepheshe we-Semalt: Izinhlobo Zombhalo Wama-Anchor Nendlela Yokuzilungiselela Nge-SEO Engcono
Enye yezinto ezihamba phambili ezisebenzayo zokusesha injini tricks ukusetshenziswa kwe-anchor text. Uma isetshenziswe kahle, umbhalo we-anchor ungathuthukisa ngokuphawulekayo indawo yesayithi kwi injini yokusesha amakhasi emiphumela (SERPs).
Kulabo abangakwazi kakhulu le ndaba, u-Andrew Dyhan, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwemakhasimende, uchaza ukuthi umbhalo we-anchor ubhekisela ezinkambeni ezixubile noma embhalweni oxhumana nabo - us technical consultants. Ngokuvamile, abalingiswa / umbhalo banombala ohlukile kuwo wonke okuqukethwe futhi ngezinye izikhathi kugcizelelwe. Uma umsebenzisi echofoza umbhalo we-anchor, uyiswa kwenye indawo. Ungakha lezi zikhonkwane usebenzisa i-HTML noma i-CSS.
Kungani imibhalo ye-anchor ibaluleke kakhulu ku-SEO?
Amatheksthi okufaka ama-anchor angeke athandwe njengamanje uma ayengasetshenziswanga ngenhloso ye-backlinks. Badlala indima enkulu ekusebenziseni ama-backlink (okubalulekile kwe-SEO simo factor). Ngaphezu kwalokho, izinjini zisebenzisela ukupholisa amawebusayithi ngokuseqophelweni eliphezulu nokugaxekile. Yingakho kubaluleke kakhulu ochwepheshe be-SEO ukuba baqonde ngokucacile ukuthi bangasebenzisa kanjani imibhalo ye-anchor kahle.
Umbhalo we-Anchor uphinde uwusizo kubafundi bokuqukethwe njengoba ubanika umbono wokuthi yikuphi okuqukethwe okufanele bakulindele ukuthola endaweni ekuhlosiwe kuyo.
Izinhlobo ze-Anchor Text
Kunezinhlobonhlobo eziningi zombhalo we-anchor. I-SEO ochwepheshe bangasebenzisa eyodwa noma inhlanganisela yokuhluka okulandelayo ukuze kulungiselelwe okuqukethwe kwabo:
Amahange ahloswe: Ochwepheshe bezokukhangisa ku-inthanethi ababandakanya ukwakha isixhumanisi ukudala imibhalo ye-anchor ngamagama angukhiye afana namagama angukhiye wekhasi lewebhu noma idokhumenti abayikhomba. Ngamanye amazwi, uma ufuna ukuxhumanisa nesayithi elinomthelela mayelana 'nemibono yokulungisa ikhishi', wena sebenzisa leli gama eliyisihluthulelo kuma hyperlink yakho.
Umbhalo we-anchor ojwayelekile: lezi zixhumanisi ezichazayo ezikuqondisa ezinsizeni okungenzeka zibe usizo. Izibonelo zamahange ezindala zihlanganisa "thola ulwazi oluthe xaxa lapha", "chofoza lapha ngenombolo yamahhala", "thola i-eBook yakho yamahhala lapha" nokunye.
Amahange anikeziwe: Amahange anikeziwe asebenzisa igama lomkhiqizo webhizinisi lesayithi njengombhalo. Zibhekwa njengezinhlobo eziphephile zokuthi zisetshenziswe. Yingakho imikhiqizo emikhulu efana ne-Amazon izosebenzisa amathekisthi amaningi anchor njengoba kungenzeka kunakho okuqukethwe njengoba kunamathuba amancane okusebenza kahle.
Ukusetshenziswa kahle kokusetshenziswa kokusetshenziswa ngokweqile kwombhalo ofanayo we-anchor ekhasini noma ukubukeka kombhalo ofanayo kumakhasi amaningi wewebhusayithi. Kungabangela ukuphenywa ngezinjini zokusesha njengoba leli khasi libonakala njenge-spammy futhi lingabi lomsebenzisi. Ngakho-ke, kufanele ukuthi kugwenywe ngendlela efanele.
Izikhonkwane zokuxhumanisa ezingenalutho: Lezi yimibhalo e-anchor esebenzisa i-URL yesayithi ukuyibuyisela kuyo. Zilula ukusebenzisa kodwa zidinga ukuthi zisakazwe kahle ngaphakathi kokuqukethwe. Ubukhulu bezinsimbi zangasese zokuxhumana akumele kudlule u-15%.
Izithombe kanye ne-'al 'tag njengamahange: Ukusetshenziswa kwezithombe kwi-website okuqukethwe kunconywa namuhla. Kuyasiza ukwandisa ukuxhumana komsebenzisi okuqukethwe. Uma usebenzisa isithombe njengesixhumanisi kwenye indawo, uphinde unikeze ithegi efanele 'ye-alt' yesithombe. Izinjini zokusesha zifunde le 'al-' tag njengombhalo wehange.
Ihange LSI (Latent Semantic Indexing): I-LSI ibhekisela ekusetshenzisweni kwezingqikithi (hhayi izilinganiso eziphelele) zegama elingukhiye eliyinhloko. Ziyizinto ezihlukahlukene kakhulu zegama elingukhiye. Ama-anchor e-LSI ayasiza kakhulu uma ungafuni ukusebenzisa igama elingukhiye ngqo kuzixhumanisi zakho.
Olunye uhlobo lwembhalo we-anchor olubhekwa njengokuphephile futhi oluphumelelayo yinhlanganisela ye-brand kanye ne-eyinki yegama elingukhiye. Kulesi simo, udala ama-hyperlink ngegama lakho lomkhiqizo negama eliyinhloko lokuzikhethela. Isibonelo, ungasebenzisa "izinsizakalo zokuhlanza ngokuthi 'igama lakho lomkhiqizo'" njengombhalo wakho wegama lomkhiqizo wegama eliyisihluthulelo.
Uma ufuna ukuthola okungcono kakhulu kokukhipha imibhalo, qiniseka ukuthi uwasebenzisa ngokucabanga. Kufanele zihanjiswe ngokufanelekile nakubantu abalungile. Kumele futhi kube mncane futhi afanele kokuqukethwe kokubili ikhasi lokuxhumanisa nelitshe. Amatheksthi okusikwa kwe-spammy yiyitikithi eqondile yokubheka njengamanye amahange angezwakala emvelo ngaphakathi kombhalo. Ungalokothi usebenzise amathekisthi anothi anjalo kokuqukethwe kwakho ngoba nakanjani uzolimaza i-SEO yakho.